Ibta Naasaha oo loo qanqaniino si khafiif ah oo ay xaasku ku istiinto. - iftineducation.com
Ibta Naasaha oo loo qanqaniino si khafiif ah oo ay xaasku ku istiinto.
-Waxa loo baahan yahay ah in fanka ciyaarta aan loo adeegsan oo qura bishimaha, sababta oo ah sida bishimaha oo kale amaba kasii daran bey labada gacmoodna qayb lixaad uga qaataan fankaasi, iyagoo weliba gaara goobo istiin aanay bushimuhu gaari karin.
-Calaacasha gacanta oo la dhunkadaa ma laha istiin sidaasi u sii ridan, ha yeeshee waxa uu sii kordhaa kolba marka dhudhunka iyo gacanta xaggeeda sare loo sii dhaqaaqo, gaar ahaan dhanka
-Goobaha istiin qaadashadu guud ahaan, waxay ku badan yihiin agagaaraha daloollada jirka, labada naasna waxa lagu tiriyaa inay kamid yihiin goobaha ugu istiinka badan jirka, waxaana uu gaaraa heerkiisa ugu sarreeya kolka la maraanmaro ibaha naasaha. Waxa jira dhowr hab oo loo maraanmaro ibaha naasaha loona kiciyo dareenkooda.
-carrabka marka lagu nuuxnuuxyo ibta naaska xaasku waxay dareemaysaa istiin aan la soo koobi karin
faarax murtiile oo si toos ah u feeray Gabar fanaanad ah oo ruwaayad la jileesay Daawo muuqaalka
Muqaal oo hin kaa keenaya oo naxdin aad u xun ah Daawo muuqaalka Caruurtana ka ilaali